Toriteny an-kira krismasy 2016
Fitsangatsangànana famaranana ny taona 14/07/2017
Fandraisana anjara tamin'ny Protestants en fête Bercy 29 sep 2013
Toriteny an-kira Paska 2017
Antoko Mpihira miaraka amin'ny sampana zavamaneno
Choeuruni 2018 - Toulouse
Accueil Ireo Sampana Antoko Mpihira Famerenan-kira 12-09-2015
Écrit par Mpandrindra ny Antoko Mpihira
“Isaorana anie Andriamanitra, Rain’ i Jesosy Kristy Tompontsika, Rain’ ny famindrampo sady Andriamanitry ny fampiononana rehetra”; 2 Korintiana 2:15
Inona tokoa moa no antony hilàn’ny Kristiana ny fampiononana ? hiarahantsika mahalàla, tsy inona izany fa noho ny fijaliana rehetra atrehany eto amin’izao tontolo izao hiainany izao.
Misy tokoa olona milàza fa mpanara-dia an’i Kristy, ary dia mampanantena ireo mihaino azy fa hitsahatra tanteraka ny fahasahiranana rehetra misy eo amin’ny fiainany, raha toa ka mivadi-po ka mitodika amin’Andriamanitra izy.
Tsarovy fa ny filazantsara anefa dia tsy manao izany fampanantenàna izany mihintsy, raha mikasika ny fiainantsika ety an-tany no resahana.
Ny filazantsara aza dia manambara tokoa, fa araky ny maha kristiana anao, no vao maika hiatrehanao aza ny fanoherana ny devoly eto amin’izao tontolo izao. Araky ny maha kristiana anao no hanoheranao mafimafy kokoa ny fahotàna eto amin’izao tontolo izao.
Tsarovy fa ny fahoriana mianjady amin’ireo tsy mino, dia mety hihatra ihany koa amin’ireo mpino : “fa Izy mampiposaka ny masoandrony amin’ ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy ary mampilatsaka ny ranonorana amin’ ny marina sy ny tsy marina.” Matio 5:45.
Saingy ny mpino kosa dia mandray tokoa ny fampiononana sy ny fampindram-po ao amin’I Jesoa Kristy, ary tsy hiala intsony amin’I Kristy izy satria Kristy no fanantenàna natao ho azy, ho amin’ny fiainana mandrakizay.